10 Zvikonzero Nei Bhizinesi Diki risingakwanise Kurega Yemagariro Midhiya | Martech Zone
Chipiri, January 28, 2014 Muvhuro, Ndira 27, 2014 Douglas Karr
Jason Squires akaisa pamwechete inofungisisa rondedzero ye 10 Zvikonzero Nei Bhizinesi Diki risingakwanise Kurega Zvemagariro Midhiya. Inopa humbowo hwese chero bhizimusi diki rinodiwa kana vanga vachiri kuda kuziva kuti votora dive here kana kuti kwete. Ini ndaigona kutetepa zvese izvi kusvika kuzvikonzero zviviri chaizvo, hazvo:
Vamwe vako, tarisiro uye vatengi varipo izvozvi. Iwe uripo here pavanoda rubatsiro? Iwe uripo here kuvaraira pakutengesa kwavo kunotevera?
Makwikwi ako anogona kunge asipo! Vanhu vazhinji vanoshandisa izvi sepembedzo… hapana munhu muindasitiri yedu ari pane vezvenhau. Wow… mukana unoshamisa zvakadii wekuti iwe urime mureza wako muvhu! Wakamirira chii? Makwikwi ako kutanga?
Kufumura, kuzivikanwa, kuvimbika… izvi zvese zvikonzero zvekukunda nyaya dzekuvimba. Kuisa hunhu hwako nevanhu vako pamberi pekambani yako pachinzvimbo chekuhwanda kuseri kwechiratidzo chako kunoita kuti uve munjodzi. Izvo zvinoita sekunge zvakashata, asi hazvisi. Vanhu vanoda kushanda nevanhu - kwete marogo!
hesi! ndine zano rakanaka kubva kublog rako cz ndinomhanyisa bhizinesi diki uye ndinofunga kusimudzira pa internet. Iye zvino ndichaita chaizvo nerubatsiro rweyako post. 🙂
Isu tateedzera ese Social Media Mitemo yeBusiness Bhizinesi Redu uye HAPANA chinhu chakashanda sezvakafungidzirwa neSocial Media Gurus - Izvi zvese hype uye NOT100% vimbiso yekubudirira. Isu takange tisina CHINOTUNGAMIRIRA CHIZVARWA, KWETE KUTENGA MUTENGESI uye hapana chatakaedza kufambisa bhizinesi kumberi. Asi isu takashandisa yakawanda mari yekushambadzira. Uye ndapota usatitaurire isu kuti takazviita zvese zvisirizvo nekuti isu hatina - Facebook, Twitter, Pinterest, Blog uye Webhusaiti… Tiri Vatengesi Nyanzvi uye Tiedza maGurus ese; zano… Yaro yese hype.
Kukadzi 2, 2014 na6: 09 PM
@anthonysmithchaigneau: disqus mhedzisiro yako HAIITI zvisingawanzo uye handimbofa ndati "wakazviita zvisizvo". Ukaramba uchiverenga bhurogu yedu, iwe uchaona kwataka sundira kumashure kupokana ne 'gurus'. Ndosaka tichikurudzira kutarisisa kuri kwakawanda-chiteshi pane kungoita zvemagariro. Mamwe maindasitiri haasati avepo, dzimwe nharaunda hadzipo, uye dzimwe nguva hazvisi izvo zvetsika zvakakodzera kune bhizinesi. Ini ndinofunga zvinogara zvichisekesa mashandiro enhau enhau Haasi ese maindasitiri akafanana, hazvo!
Iniwo ndinotenda ndosaka, mu2013 yekushambadzira sarudzo, vashambadzi vadzosa pfungwa dzavo kudzoka kushambadza neemail senzira yekutanga. Tinoda vezvenhau kushandisa se 'echo' uye kusimudzira zvemukati medu - asi isu tichiri kuvimba nedzimwe nzira senge kutsvaga, email, kushambadza uye kunyange kuyedza kuyedza. Kutenda nekujoinha hurukuro!
Mhinduro yakanaka yakadzikama kubva kuna Douglas kuna Anthony.
Gumiguru 14, 2016 na6: 19 PM
Zvimwe zvikonzero zvakanaka zvekuenda pasocial media! Ndakaona zvichinetsa kuwana zvemukati zvekutumira kusvikira shamwari yangu yandiudza kuti ndishandise Capzool, ivo vakagadzirira zvigaro zvemabhizinesi angu maviri eniche, uye vanozoita zvimwe kana ndikazvikumbira. Kune zvakare khalendari yekukurudzira iyo inondipa zvinyorwa zvemazuva ese egore. Ndinokurudzira munhu wese kuti aishandise!